Madaxweyne Shariif: Qaraxii Tiyaatarka wuxuu ku dhacay khalad kayimid Dowlada! | KEYDMEDIA ONLINE
Madaxweyne Shariif: Qaraxii Tiyaatarka wuxuu ku dhacay khalad kayimid Dowlada!
Muqdisho (Keydmedia) - Madaxweynaha Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in Qaraxii ka dhacay tiyaatarka Muqdisho uu ku yimid khalad ka yimid Dowlada gaar ahaan Wasaaradda warfaafinta.
"Dhacdadii ka dhacday Tiyaatarka waxaan aamisanahay inuu ka yimid Qorshaha xafladda oo sidii loogu talogalay aan loo sameyn," ayuu yiri Sheekh Shariif.
Sheekh Shariif ayaa sheegay in Hay'adaha Ammaanka iyo Madaxda dowladda aan la ogeyn Abaabulka xafladda, taasna ay keentay in si fudud looga faa'iideysto.
Sheikh Sharif ayaa sheegay in uu Warsaday Wasaarada Warfaafinta Qorshaha Maamuuska ee Xaflada iyo Dadka kasoo qeybgalaayo, hase ahaate waxba loo keenin, sidoo kale wuxuu sheegay in lagu casuumay munaasabadda balse uu u baaqday Duruufo kale.
Keydmedia.net- Xafiiska Muqdisho